Ihosy : Tafapetraka ny foiben’ireo Kômandô hiady amin’ny dahalo -
AccueilRaharaham-pirenenaIhosy : Tafapetraka ny foiben’ireo Kômandô hiady amin’ny dahalo
Am-perinasa ankehitriny ilay toby misy ireo vondron-tafika manokana hifanandrina amin’ny malaso, any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy. Napetraka tamin’ny fomba ofisialy omaly ny foiben’ireo Kômandô hiady amin’ny dahalo, ka ao Ihosy no foibe toerana misy izany. Nomena ny anarana hoe « Bataillon Inter-Armée Malagasy » izy io. Andraikitra sy iraka manokana nampisalorana ity toby vaovao ity ny famongorana hatramin’ny fakany ny asan-dahalo, izay mampijaly ny vahoaka amin’iny faritra iny. Fanamby napetraky ny filoha Rajaonarimapianina rahateo izany.
Mampiasa fitaovana mahery vaika ireo dahalo, ary ho setrin’izany dia miomana amin’ny fampiasana fitaovana raitra kokoa noho ny an’ireo dahalo ny mpitandro filaminana avy amin’ity foibe ity. Andian-tafika manokana mihitsy araka izany no mipetraka ao amin’ity foiben’ny Komando ity, izay ahitana tafika an-tanety sy an’habakabaka. Hampiasa helikoptera izy ireo amin’ny iraka ampanaovina azy. Isan’ny manatevin-daharana ao anatin’ity andian-tafika ity ny miaramila voafantina avy ao amin’ny vondron-tafika mpilatsaka an’elon’aina Rezimanta voalohan’ny Hery Vonjy Taitra (RFI) ao Ivato, sy ny tafika an-dranomasina avy ao Antsiranana, ny hery manokana niofana tao Ambatoloana, ary koa ny avy ao amin’ny vondron-kery an’habakabaka, izay hisahana ny lafin’ny fanamoriana ny fiaramanidina kely sy helikoptera. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina moa no tonga nanotrona izany fitokanana izany, omaly.
Natolotra tamin’ity fotoana ity koa moa ny fitaovana avy amin’ny fitondram-panjakana, hoentina miaro sy miatrika ny loza voajanahary.
Nanatanteraka fivoriambe izay nanasany solontena iray isaka ny kaomina manerana ny Nosy ny fianakaviamben’ny Kung Fu Wisa tarihin’ny Grand Maitre Avoko Rakotoarijaona. Teny amin’ny « Temple de Pierre Mizael » Ambatomirahavavy, ny sabotsy sy alahady ...Tohiny